I-diffusion - Wikipedia
I-diffusion eyenzeka ngokweenkqubo ezimbini: e-chemical ne-biological, ii- molecules zihamba zingumthombo zisuka kwinto okanye kwindawo ethile , esingathi (ngamanye amagama apho kuqhuma khona) yi-high concentration (apho zininzi khona ezi- molecules) zisiya kwindawo echazwa ngokuba i-low concentration (apho ke zimbalwa khona ezi molecules).
Umzobo obonisa indlela eyenzeka ngayo i-diffusion. Umzobo wokuqala ubonisa ii-particles ze-liquid. Owesibini ubonisa kwale liquid, emva kwemizuzu embalwa xa sele ii-particles zithe saa kuyo.
I-diffusion idla ngokwenzeka nge-gas okanye nge-liquid. Kuyenzeka okokuba uyibone i-diffusion isenzeka xa ii-liquids ezimbini zixutywe kwizitya ezi-transparent. Ichaza intshukumo yee-particles emi eyenzeka ndawonye kuzo zonke ii-liquids kwanakwii- gases.ezi particles ziyabula zigqibe yonke indawo ekwesi sitya zide ziman'ukungqubana. I-diffusion ingasebenza kwii-gases nakwii-liquids. Nantsi inxalenye yemizekelo ye-diffusion:
umcu weswekile ushiywe kwikomityi yamanzi ixesha elide.
Ivumba le-ammonia lithe saa ukusuka entla kwigumbi lokufundela ukuya phaya emva.
Ivumba elimnandi lesiqholo livakala kakhulu lisuka kwibhotile yesiqholo xa kususwe isiciko sayo.
Ukutya okumbejembeje okufakwe kwisitya kuthi saa kweso sitya.
Ii-Molecules zithanda ukuhamba zisuka kwindawo apho zisuka okanye zininzi khona ezo ndawo ke sithi zii-high places concentration, ziye kwiindawo ezingekho kuzo nekuthiwa zii-low places of concentration, ngokuzihambela nje kwazo zingalawulwa nto. Umzekelo, kukho i-oxygen ethe chatha emphungeni xa kuthelekiswa naleyo isegazini, ngoko ke ii-molecules ze-oxygen ziyakuthanda ukuhamba zisiya egazini. Ngokunjalo, zingaphezulu ii-molecules ze-carbon dioxide egazini xa kuthelekiswa nezo zisemphungeni, ngoko ke ii-molecules ze-carbon dioxide ziyakuthanda ukuhamba ziye kungena emphungeni. .
Apho kukho ingxinano enkulu, ngenxa yokuyabula kwee-molecules ezingamanzi, ziyakuthanda ukuthi saa kuloo nto de zibe azisenako ukuhamba.
Funda nanga amanye amaphephaEdit
Last edited on 30 EyeThupha 2016, at 07:22
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-30 EyeThupha 2016, kwi-07:22